Ndị anyị - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ahụike Uche Bromley
Ahụ ike uche Lewisham
Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi
Wụpụta Ngwungwu Ọzụzụ Echiche Ahụike Gị
Ọzụzụ Mental Health First Aid
MindCare Dementia Ọzụzụ
Ọrụ & Ọrụ Afọ Ofufo
Zọ ndị a ga-esi nye onyinye
Nchịkọta ego na ihe omume
Hapụ Onyinye n’Uche Gị
Nye na ebe nchekwa
News & Ihe
Kpọtụrụ BLG Mind
Erslọ Ọrụ & iceslọ Ọrụ
Chọọ saịtị a
Enyemaka Mberede Akwụkwọ Akụkọ inye
Ọzụzụ ọgụgụ isi
Ọzụzụ ahụike uche dị njikere ịga
Wụpụta Ihe Ọzụzụ Gị
Ọzụzụ ahụike uche ụlọ akwụkwọ
Ọrụ na Ọrụ Afọ Ofufo
Bụrụ enyi nke BLG Mind
Banyere BLG Mind
Onye anyị na-
Otu Anyị Si Abata Nsonye
Akụkọ ihe mere eme anyị
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Ndị Anyị
Ndị anyị bụ akụ anyị kacha baa uru. Site na 'ndị anyị', anyị pụtara ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ afọ ofufo na ndị nlekọta.
N'inwe ihe karịrị ndị ọrụ 180 na -akwụ ụgwọ yana ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 260, ọ gaghị abụ ihe ezi omume igosi mmadụ niile, mana ndị otu ndị isi njikwa anyị, ndị njikwa ọrụ na ndị nlekọta nwere ike ịhụ ebe a. Enwere ike ịchọta ndị ọrụ ndị ọzọ na ibe ibe ọrụ yana ọbụlagodi na egosighi ndị ọrụ, enwere ụzọ iji kpọtụrụ anyị na ibe ọ bụla. Ndị ọrụ afọ ofufo anyị nwere peeji nke ha raara onwe ha nye.
Iji gụkwuo gbasara ndị na -elekọta anyị, pịa aha ha naanị wee hụ obere biog. Ozi a dịkwa maka ụfọdụ ndị njikwa.
Otu Ndị Isi Nlekọta
Ben sonyeere BLG Mind na 2005 wee bụrụ onye isi nchịkwa na 2012.
Ben bụ onye ọrụ na-elekọta mmadụ site n'ịzụ ọzụzụ ma nwee ahụmahụ karịa afọ 20 na ọrụ nduzi, karịsịa na ọrụ ebere ahụike uche. Ọ na-enwe mmasị na ikpe ziri ezi nke ọha mmadụ, ọrụ dị mkpa nke ngalaba afọ ofufo na uru nkwado ndị ọgbọ.
Ihe ndị Ben na-ebute ụzọ gụnyere ịmepụta otu n'ime ya, ịmepụta mmekọrịta dị irè na iji ọmịiko na-eduzi.
Onye nlekọta nke Bromley Third Sector Enterprise, Ben bụkwa onye ndu ngalaba ahụike uche maka South East London.
Dominic Parkinson Uchechukwu
Director nke Ọrụ
Dominic sonyeere Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na 2014, ebe ọ nọrọ ihe karịrị afọ 20 na-arụ ọrụ maka NHS, ndị isi obodo na ngalaba ọrụ ebere, yana ahụmịhe afọ 17 na-arụ ọrụ na ọrụ ahụike ọgụgụ isi. Nke a na-agụnye -lọ akwadoro elekere 24 site na nkwado nke obodo iji zụlite nnwere onwe.
Director nke ego na ihe onwunwe
Debbie sonyeere Bromley, Lewisham & Greenwich Mind dị ka Isi nke Ego na 2010. Ọrụ ya abawanyela kemgbe iji tinye ọrụ maka Ọrụ Ndị Ọrụ na akụrụngwa.
Debbie bụ onye na-edekọ ego na-akwụ ụgwọ, ọzụzụ na KPMG n'ime Ngalaba Na-ahụ Maka Ọha Ọha.
Mgbe afọ 5 na KPMG gasịrị, o kpebiri ịkachasị ego na ngalaba ọrụ ebere ma rụọ ọrụ maka ọrụ ebere abụọ dị iche iche na ọnọdụ njikwa ego, tupu ha abanye na Bromley, Lewisham & Greenwich Mind.
Ebumnuche Debbie na ọrụ ya bụ iji hụ na ejiri akụ anyị niile rụọ ọrụ nke ọma yana rụọ ọrụ nke ọma iji nwee ike ịnye ezigbo ọrụ dị mma n'ụzọ dị mma.
Onye Nduzi nke Oru
Sally sonyeere BLG Mind na 2017 dị ka osote onye isi ọrụ na Greenwich, ewelitere ya n'ọrụ ọhụrụ nke Director of Operations na 2021.
Na mbụ, Sally na-arụ ọrụ na Mind na City, Hackney & Waltham Forest, na tupu nke ahụ n'ọtụtụ ọrụ na-elekọta ọrụ nkwado na ndụmọdụ n'ofe mba ahụ. Ọ nwere mmasị karịsịa ka ọ ga-esi nwee ike ịkwado ndị otu anyị ka ha wepụta ọrụ kacha mma, na-amụta ihe site n'aka ibe ya ma na-achọ ịnọgide na-emeziwanye ihe anyị nwere ike inye.
Ndị isi ngalaba
Isi nke Development
Nkwukọrịta, inweta ego, ọzụzụ ahụike ọgụgụ isi na mmepe azụmaahịa
Ọrụ m na BLG Mind bụ ileba anya na nkwukọrịta / ahịa, nchịkọta ego na ọrụ ọzụzụ ahụike ọgụgụ isi n'ime nzukọ ahụ. M sokwa na emepe BLG Mind dị ka azụmaahịa, ide ederede, ọnụ na ngwa ahịa, na-enye aka na ntụzịaka usoro ma na-akwado ndị ọrụ ndị ọzọ ịzụlite ọrụ ọhụụ, ịchọpụta mkpa, ịhazi dịka mkpa na ịmalite.
Ahụmịhe m dabere na ọha na eze na mpaghara nke atọ ebe m nwere ọtụtụ ọrụ n'ọtụtụ afọ 25 gara aga. N’etiti ọrụ m niile bụ nkwukọrịta siri ike ma enwere m nnukwu mmasị maka itinye aka na ime ihe nzaghachi nke ndị ọzọ nyere iji hazie ma melite ọrụ maka ka mma. Arụrụ m ọrụ dịka onye ndụmọdụ ruo afọ asaa, na-achịkwa ọtụtụ ọrụ, site na ịhazi nnukwu ihe omume obodo ka ị na-eme mkparịta ụka na ịrụ ọrụ mgbasa ozi, na-enye nyocha nke ndị ọzọ maka ndị na-akwado ego.
Laura Saksena kwuru
Bromley Isi nke Ọrụ
Lewisham Isi nke Ọrụ
Onye isi ọrụ Greenwich nwa oge
Ndị njikwa ọrụ Cross-Borough
Onye njikwa ọrụ IPS
BLGMind / OXLEAS NHS IPS Ọrụ Ọrụ
Onye njikwa, Service Bereavement Service South East London
Tupu m sonye na BLG Mind, ahụmịhe m dabere na ịnye ndị okenye nwere mkpa ahụike uche mgbagwoju anya ọrụ nkwado. Enwekwara m iwu na ọrụ nyocha na ngalaba ọrụ ebere ma bụrụ onye ọrụ afọ ofufo.
Enwere m mmasi maka omume na -atụgharị uche yana mmetụta nke ọdịbendị na -arụ ọrụ n'ịdị mma ọrụ. Dị ka onye njikwa nke Ọrụ Ịgbaghara Onwe Onye, M na -edu otu gafee òtù mmekọ anọ; ọnụ, anyị na -enye nkwado mmetụta na nke bara uru nye ndị mmadụ gburu onwe ha na South East London niile.
Christine Gallagher kwuru
Onye njikwa nka dementia
Ndị nne na-eche echiche & ịbụ onye njikwa ọrụ nna
Onye njikwa ọrụ Lewisham & Greenwich Dementia
Nkwado Lewisham Dementia na Ozi & Nkwado Greenwich
Lewisham na ndị isi ọrụ Greenwich
Onye osote onye njikwa, Otu Ahụike Isi Nlekọta Ahụike & Otu Nlekọta Nlekọta Nlekọta Ndị Nlekọta Ọha Mmadụ
Onye njikwa ọrụ ọdịmma obodo Lewisham nwa oge
Ndị isi ọrụ Bromley
Onye njikwa ọrụ Bromley Dementia
Bromley Dementia Nkwado Hub, MindCare Nkwarụ Nkwado
Arụrụ m ọrụ na ngalaba afọ ofufo / ọrụ ebere maka ihe karịrị afọ iri abụọ na ọtụtụ ndị dị iche iche, site na ụmụaka na ezinụlọ ruo ndị okenye.
Na m ugbu a ọrụ dị ka Bromley mgbaka Ọrụ Manager, M anya mgbe Bromley Dementia Nkwado Hub, nke n’enye aka ndi mmadu ndi nwere nsogbu mgbaka na ndi n’elekota ha aka inweta oru ha kachasi diri ha, na Mindcare Dementia Respite at Homelọ Ọrụ, nke na-enye ezumike awa atọ kwa izu maka ndị nlekọta na-elekọta ndị ezinụlọ. N'ịbụ onye na-elekọta m, aghọtara m ndụ ndụ ndị ọrụ a na-enye ndị nwere isi mgbaka na obodo anyị.
Onye njikwa ọrụ ahụike uche na ọdịmma Bromley nwa oge
Ndị isi ọrụ Central
Ndi oru ochichi na ndi mmadu Development Manager
Onye njikwa ICT
Andrew arụ ọrụ na ụlọ ọrụ IT ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30, na mgbe afọ iri gachara na Channel Four Television, afọ asaa na -agba IT maka Save the Children UK na afọ iri ọzọ dị ka onye ndụmọdụ IT nwere onwe, ọ sonyeere BLG Mind na a. oge nwa oge iji weta ahụmịhe ya bara ụba na nzukọ Mind obodo ya.
Amụrụ ma zụlite ya na South East London, mana ọ nwere ihe ndabara ọma ime njem nke ukwuu maka ọrụ na ihe ụtọ, ugbu a ọ bi na Beckenham ma jiri ịnụ ọkụ n'obi na-arụ ọrụ site na nhazi IT maka BLG Mind na ebumnuche nke ime ka ha rụọ ọrụ nke ọma. ma baa uru dịka ha nwere ike.
Onye njikwa ego
Rebecca Jarvis kwuru
Onye isi oche nke Kọmitii Ndị Nlekọta
Ejirila m ọtụtụ ọrụ m na-arụ ọrụ na ahụike na nlekọta ahụike ma bụrụ onye isi ugbu a na-arụ ọrụ na Health Innovation Network (HIN), Academic Health Science Network maka ndịda London, nke na-achọ ime ngwa ngwa nkwekọrịta nke ọhụrụ na ahụike na nlekọta ahụike. nnyefe ọrụ.
Arụkwara m ọrụ afọ anọ dịka Strategic Commissioning Manager maka ọrụ ndị agadi na Bromley, na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ofe Kansụl na mgbe ahụ Primary Care Trust (PCT). Ọ bụ m maka ịnye ọrụ dị iche iche gụnyere ụfọdụ sitere na Bromley MindCare.
N'ime ọrụ ndị a, enwetala m nkọwa sara mbara banyere usoro nlekọta ahụike na mmekọrịta mmadụ na eze, ikike iduzi, yana ikike ịme ndị dịgasị iche iche gụnyere ndị dọkịta, ndị isi atụmatụ, ndị ọrịa, ndị ọrụ ọrụ na ndị na-elekọta ha.
Agụrụ m onye nlekọta nke Bromley, Lewisham & Greenwich na 2014, dịka m nwere mmasị na ịkwado ndị mmadụ na nsogbu ahụike uche na mgbaka na-emetụta. Ọ na-adị m ka m nwere ụfọdụ nka na ahụmịhe bara uru ịnye ma ọ na-atọ m ụtọ ikiri nzukọ a na-eto ma na-etolite. A na m amụtakwa ọtụtụ ihe gbasara etu e si agba ndị ọrụ ebere ma na-achị ha.
M sonyeere bọọdụ na 2018 wee biri na Greenwich.
Mgbe afọ 30 gasịrị na ụlọ akụ azụmahịa na njikwa akụ, dị ka onye ọkachamara n'ihe ize ndụ na nrubeisi, abanyela m na ngalaba ọrụ ebere ma na-arụ ọrụ nwa oge maka Marie Curie dị ka isi ihe ize ndụ ha. Abụ m akụkụ nke otu ndị isi ndị isi na ọrụ maka ịmepụta usoro njikwa ihe egwu nke ọrụ ebere. Iji gosipụta nkwa m na-eme ka nghọta m nke enweghị nhata, nabata ohere m na iji olu m ma n'ime ma n'èzí kwalite nsonye, ​​enwere m mpako ịbụ onye mmekọ nke netwọk Marie Curie Ethnic Diversity.
Mgbe oge ruru, m na-eduga njem ahụike na Greenwich Park wee wepụta onwe ya na Africa na-akwado ndị ọrụ ebere na-akwalite nsonye na nkwado ego.
Site n'ahụmahụ onwe onye nke ndị òtù ezinụlọ achọpụtara na dementia na ndị enyi m hụrụ n'anya nwere nsogbu ahụike uche, enwere m obi ụtọ isonye na otu nzukọ na-eme ezigbo mgbanwe na ndụ ndị mmadụ ma nwee olileanya iji agụụ, ume, ahụmahụ na nkà ọkachamara na-akwado evolushọn. nke BLG Mind.
Onye isi oche nke Board
M bi na Lewisham ruo ihe karịrị afọ 30. Ejirila m afọ 25 na ụlọ ọrụ ọgwụ (Wellcome, GSK) na ngalaba ọgwụ na-arụ ọrụ dị ka onye njikwa ọrụ na ọtụtụ ndị otu ọzụzụ na nyocha, mmepe na imepụta ngwaahịa profaịlụ dị elu. Enwekwara m akwụkwọ ndị na-achịkwa usoro iwu ma duzie nyocha na nkwenye nke ngwaahịa ọgwụ na obodo UK na Europe.
A na m arụ ọrụ ugbu a na ngalaba mmụta dịka onye nkuzi na onye ndụmọdụ na-etinye aka n'ịkwalite ụkpụrụ iru eru n'ụlọ akwụkwọ, bụrụkwa onye gọvanọ ụlọ akwụkwọ na onye ọrụ ụkpụrụ ule. Abụkwa m onye isi oche otu ndị isi obodo na Lewisham, bụ nke etinyere aka n'ịgbasa enweghị aha na enweghị aha nke ndị otu pere mpe na mpaghara ọha na nke onwe site na mmekorita nke ụlọ ọrụ na mpaghara ahụike, ọdịmma na agụmakwụkwọ.
Agụrụ m onye nlekọta na Bromley, Lewisham & Greenwich Mind n'ihi ihe karịrị afọ 15 biri ndụ na ahụike uche n'ime ezi na ụlọ, ọrụ dị iche iche nke ọrụ ebere na-enye dọtara mmasị m. Ekwenyere m na ọ dị mkpa iji dozie ahụike akụkọ ihe mere eme na enweghị ahaghị nhata n'ọkwa niile nke obodo anyị na ịkwalite na mejuputa atumatu nsonye na BLG Mind n'ime ọrụ anyị, ndị mmadụ na omume anyị na imeziwanye ahụike uche na ọdịmma nke ndị otu anyị dị iche iche. obodo
Lisa Burnand kwuru
Ebiwo m na Blackheath ruo afọ 30 wee bụrụ onye nlekọta nke Bromley, Lewisham na Greenwich Mind na 2018. Ọrụ ndị ọrụ ebere na-arụ iji kwado ahụike uche na ọdịmma nke ndị nọ ná mkpa karịsịa na-emetụta m, ebe ọ bụ na onye òtù ezinụlọ na-eche ihu ihu. nsogbu ahụike uche ruo ọtụtụ afọ na Uche nyere nkwado bara uru n'oge dị oke mkpa. Enwere m obi ụtọ ịme òkè m n'ịkwado ọrụ dị oke mkpa nke Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na-enye ndị obodo.
M ọkachamara ruru eru na mpaghara nke ego ize ndụ management na mgbe a ọrụ na-arụ ọrụ na ahịa-eche ihu ọrụ na ụlọ akụ, M kwagara n'ime consultancy na oru ngo na-arụ ọrụ, kacha nso nso a na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ nzube nzukọ ọkachamara na mmetụta itinye ego.
Aghọtala m mgbe niile mkpa ọ dị mkpa imekọ ihe ọnụ na nzikọrịta ozi mepere emepe. Inyere ndị mmadụ n'otu n'otu aka iru ike ha bụ isi ihe m lekwasịrị anya site na nkuzi nkuzi na mmemme nkuzi m so na ya.
Enwere m nkwenye siri ike na ndị niile nwere nsogbu ahụike uche na mgbaka nwere ikike ịnweta nkwado dị mkpa n'oge. Ahụla m nsogbu ahụike uche na ezinụlọ m wee ghọta ihe ịma aka nke a nwere ike iweta.
Mụ na nwa m nwoke Ayush bi na Woolwich. Obi dị anyị ụtọ ibi na obodo dị iche iche, ọ dịkwa m ezigbo mkpa ka m nyere Ayush aka ịghọta njikọ ya na ihe nketa ya (ọ bụ ọkara Indian, otu ụzọ n'ụzọ anọ Filipino na nkeji iri na ise Welsh!).
N'ọkachamara, m tozuru oke na Human Resources (MCIPD). M na-arụ ọrụ maka Co-op, na mbụ dị ka onye mmekọ ndị mmadụ; Otú ọ dị, abanyela m n'oge na-adịbeghị anya n'ime ọrụ nke ndu nsonye. Equity, diversity na nsonye bụ ihe na-atọ m ụtọ nke ukwuu, m na-agba mbọ ịchọpụta na iwepu ihe mgbochi sistemu na-egbochi ndị pere mpe imezu ikike ha. Anyị niile nwere ọrụ anyị ga-arụ na nke a.
Abụ m onye na-agụ akwụkwọ nke ọma ma na-emeghe mgbe niile ige ntị na ịmụtakwu ihe.
Enwere m obi ụtọ inwe ike iji HR, nka azụmahịa na ahụmịhe onye ndu iji kwado ọhụụ na atụmatụ nke BLG Mind. Enwere m ihe ùgwù dị ukwuu iji wepụta onwe ya maka ọrụ ebere a dị egwu ma ana m eweda onwe m ala mgbe niile site na ọrụ ịtụnanya nke ndị ọrụ na ndị ọrụ afọ ofufo.
Abụrụla m onye bi na Bromley ihe karịrị afọ iri anọ. Ọrụ ọkachamara m bụ na ngalaba agụmakwụkwọ praịmarị nke Bromley na Croydon, n'ikpeazụ na ọrụ nchịkwa dị elu n'ime ụlọ akwụkwọ. Mgbe m lara ezumike nká, ejere m ozi dị ka Gọvanọ Ụlọ Akwụkwọ afọ ise ma bụrụkwa onye ọrụ afọ ofufo ugbu a na King's Health Trust. Anọla m n'ọrụ a ihe karịrị afọ asaa, ọkachasị dịka onye ọbịa ụlọ ọgwụ n'okpuru nduzi nke ndị ụkọchukwu ụlọ ọgwụ.
Abụkwara m onye nlekọta mbụ ruo ọtụtụ afọ ma nwee ahụmahụ nke nsogbu ahụike uche na mmalite nke mgbaka.
Enwere m mmasị na ọrụ nkwado ndị ọgbọ n'ime ọrụ ahụike uche ma nwee olileanya na itinye aka m na Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na-enyere m aka ịkọrọ ahụmahụ m, nkà na nka m n'ime ọrụ nke Onye Nlekọta.
Abụ m onye ọka iwu tozuru oke wee malite ọrụ m na ngalaba ụlọ ọrụ, na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu anwansi. Kemgbe m hapụrụ ụwa ụlọ ọrụ, enwetala m ahụmịhe karịa afọ isii na-enye nchebe na enyemaka iwu nye ndị gbara ọsọ ndụ, ndị na-akwaga mba ọzọ na ndị na-azụ ahịa, na-arụ ọrụ na UK na na Kenya. Na Kenya, arụrụ m ọrụ maka ọrụ ebere agụmakwụkwọ ndị gbara ọsọ ndụ ebe m mepụtara ihe nzikọrịta ozi ma bụrụ onye na-ahụ maka ịnakọta ego maka nnukwu ọrụ.
A nọrọ m ọtụtụ n'ime oge nwata m na Bromley, Lewisham na Greenwich na site na akụkọ nke onwe m na ịrụ ọrụ na ndị na-adịghị ike, aghọtara m na ọ dị mkpa na otú ọ dị mkpa iji kwado ndị nwere mkpa ahụike uche na ọha mmadụ. Na-arụ ọrụ na BLG Mind, enwere m ike iji ikike iwu m na nghọta pụrụ iche m nwere na otu anyị nwere ike isi kwado ndị nwere mkpa ahụike uche.
N’ime ihe ka ukwuu n’oge m na-arụ ọrụ, abụwo m onye nkụzi na onye nta akụkọ na mahadum. Amalitere m inwe mmasị dị ukwuu n'ọrụ m na-anọchite anya ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ, ndị ọtụtụ n'ime ha nwere nsogbu ọgụgụ isi.
Ebiwo m na mpaghara Greenwich ruo ihe karịrị afọ 30 ma mara nke ọma nsogbu obodo. Ọ ga-amasị m ịmalite ịzụlite mmasị m na-enyere ndị nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na iji nka m mee mgbanwe dị ka Onye Nlekọta.
A nọrọ m ihe karịrị afọ iri dị ka onye ọka iwu n'ime ụlọ na ngalaba Charity na Alzheimer's Society na CRUK (Cancer Research UK). Mụ na ndị ọrụ ebere ndị ọzọ dị ka Marie Curie, Ndụmọdụ ụmụ amaala na ndị ọrụ ebere obodo na mpaghara ndị ọzọ dị na mmekọrịta, ndụmọdụ na inye ndụmọdụ site na ọrụ iwu m ugbu a.
Amaara m usoro nhazi ọrụ ugbu a na usoro nlekọta ọha yana nrụgide dị n'ịgba ọrụ ebere. N'ọrụ m gara aga, a dụrụ m ọdụ na Equity, Diversity & Inclusion Strategy nke ọrụ ebere wee soro na-arụsi ọrụ ike na ED na m atụmatụ na-aga n'ihu.
A bụ m onye nduzi na onye ndụmọdụ gbasara ọrụ n'ụlọ ọrụ iwu boutique. M na-ejikọta nke a na-agba ọsọ a ọzụzụ consultancy pụrụ iche na employability ogbako na webinars iji chịkọta ọdịiche dị n'etiti agụmakwụkwọ na ebe ọrụ, yana ịbụ onye ndụmọdụ onye isi maka ụlọ ọrụ nhazigharị iwu.
Abụ m onye na-akwado ahụike ahụike uche. Inwe ụmụntakịrị abụọ, enwere m ike ịhụ na ahụike uche na ịdị mma na-adịwanye mkpa na ndụ a anyị na-ebi na ịmara site na nwata dị oke mkpa. Nke a bụ ọrụ mbụ m dị ka Onye Ntụkwasị Obi, ọ dịkwa m ụtọ nke ukwuu ịnye ọkachamara na onye ndu m nye ndị otu emebelarị.
Arụla m ọrụ na ahụike uche ihe karịrị afọ 30. Ọrụ m malitere site na ọzụzụ nọọsụ na Northern Ireland. Nke a sochiri ọrụ ụlọọgwụ na London n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ na ntọala obodo, gụnyere nnukwu ọrụ ahụike uche, ọgwụgwọ ezinụlọ, ọgwụgwọ otu yana na-eduga n'ịdị mma na omume nọọsụ ahụike uche. Ọrụ nlekọta ahụike sochiri ọrụ onye ndu mba yana King's Fund chepụta na imepụta usoro ọgwụgwọ dabere na akaebe maka ndị nọọsụ yana idukwa nyocha na ụdị ụlọ ọgwụ ọhụrụ.
Arụkwara m ọrụ dị ka Isi nke Nọọsụ na Clinical Irè n'ihi Oxleas NHS Foundation Trust, na-enwe otu mmasị na-emepe emepe ọhụrụ na-eru nso na ọgụgụ isi omume.
N'oge na-adịbeghị anya, enweela m ọrụ dị mkpa n'ịzụlite ma na-eduga ndị mmadụ na-eru nso na ahụike ọha na eze na Bromley, gụnyere ndu maka mgbanwe mgbanwe na ahụike ọgụgụ isi, na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na-adịghị ike, enweghị oke aha na ị substanceụ ọgwụ ọjọọ.
Abụ m onye bi na London Borough nke Lewisham.
Ebiwo m na mpaghara Bromley n'azụ na azụ kemgbe m dị afọ 13. M tozuru etozu dị ka dọkịta na 1976 wee bụrụ GP na 1981. M na-etinye aka na nsogbu ahụike uche na Bromley kemgbe etiti 1990s mgbe onye na-ahụ maka nlekọta ahụike isi ọwụwa jụrụ m ka m bụrụ akụkụ nke otu ndị na-arụ ọrụ na-eleba anya na mmepe. ọrụ ahụike uche n'ozuzu omume.
Abụ m onye Beckenham na Penge PCG nke nọ na-arụ ọrụ site na 1999 ruo 2002 tupu e guzobere Bromley PCT na 2002. M na-eduga n'ọrịa ọgụgụ isi n'oge m nọ na PCG.
N’agbata 2004 na 2012, anọ m na Bromley Local Medical Committee (LMC) ma bụrụ onye osote onye isi oche site na 2006 ruo mgbe m kwụsịrị site na LMC na 2012. N’oge ahụ, etinye m aka na nsogbu ahụike ahụike ọgụgụ isi ma na-eduzi nzukọ nzukọ mmekọrịta kwa ọnwa. n'etiti Oxleas na LMC nke nyere aka guzobe mmekọrịta na-arụ ọrụ ka mma n'etiti GP na Oxleas.
Na 2014, m lara ezumike nká na omume m, ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ locum. Abụ m onye nlekọta na Bromley Y, onye otu Rotary Club na Langley Park, na osote onye isi ala na Bromley Rugby Club.
Site na nsogbu nke 2020 na-emetụta ọtụtụ n'ime anyị onwe anyị na ụwa niile, ekwenyere m na ịkwado maka ahụike ọgụgụ isi enwebeghị isi dị mkpa. Enweela m ahụmahụ yana ịkwado ndị ezinụlọ na ndị enyi na nsogbu ahụike nke ọgụgụ isi nke kụziiri m nnukwu ihe.
Nzụlite ọkachamara m bụ n'ọrụ ndị ahịa, mmemme nkuzi na njikwa mmemme n'ofe teknụzụ ego, nka na ụlọ ọrụ ọha. Enyerela m onwe m afọ ofufo maka ọrụ ebere ụmụ nwanyị na ụmụaka, na-enye nkwado na South London na Bristol. N'ọrụ m ugbu a, m na-arụ ọrụ dị ka onye njikwa ọrụ obodo maka ngwa netwọkụ mmekọrịta nwanyị, na-ejikọ ụmụ nwanyị na ndị nne gafee ọmụmụ na ịbụ nne.
A na m ebi na Lewisham ma enwere m mmasị n'ebe m nọ yana obodo London ndị gbara m gburugburu. Abụ m onye otu ndị otu ndị ntorobịa na-enwe mmasị n'ịkwalite mmata gbasara imelite ụdị dị iche iche n'ịkwado ọrụ. Obi dị m ụtọ ịbụ akụkụ nke Bromley, Lewisham & Greenwich Mind ndị na-arụ ọrụ bara uru na obodo anyị.
Enwere m olile anya iji nka na oke agụụ m tinye aka na nzukọ a wee gaa n'ihu na-akwado nkwado maka ahụike ka ukwuu na nkwado ahụike uche.
Onye anyị bụ, mmetụta anyị, ọchịchị na ihe ndị dị mkpa.
Iche echiche Health Info
Ihe ọmụma na ọgụgụ isi bara uru na ọgụgụ isi.
Nyere anyị aka ịnye ndụ ndụ maka ọtụtụ puku ndị bi na mpaghara.
Nye onyinye ugbu a
Banye na Akwụkwọ Akụkọ Anyị
© 2022 BLG Mind | Debanye Char Charity Nke 1082972 | Companylọ ọrụ edebanyere aha 4071152 na England | amụma nzuzo | Cookies | Sitemap
Weebụsaịtị site na White Okpomọkụ Design
Zitere anyị email site na ụdị ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike.
Aha gị (chọrọ)
Gị Email (chọrọ)
Ekwentị gị (chọrọ)
Biko hapụ ala a n'efu.
Anyị na-echekwa ma hazie data nkeonwe gị n'usoro iwu 2018 General Data Protection. Biko gụọ nke anyị amụma nzuzo.
E chebere saịtị a site na reCAPTCHA. Google amụma nzuzo na Okwu nke Service tinye.
Anyị na-eji kuki iji nye gị ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị.
Site n'ịnọgide na-eji weebụsaịtị anyị, anyị ga-eche na ị dị mma na nke ahụ. Gụkwuo banyere kuki na nke anyị ntọala.
Mechie GDPR Ntọala kuki
Kuki ndị dị mkpa
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki ka anyị wee nye gị ahụmịhe kachasị mma kachasị mma. A na-echekwa ozi kuki na ihe nchọgharị gị ma jiri ya:
kwe ka ị banye na weebụsaịtị anyị
ide maka ọrụ na ọrụ afọ ofufo
nyere ndị otu anyị aka ịghọta ngalaba nke weebụsaịtị ị kacha amasị ma baa uru
na-eme ka saịtị ahụ rụọ ọrụ dịka ị tụrụ anya ya.
Kwesịrị iji Kuki mkpa dị mkpa n'oge niile ka anyị nwee ike ịchekwa mmasị gị maka ntọala kuki.
Kwado ma ọ bụ gbanyụọ kuki
Ọ bụrụ na ị gbanyụọ kuki a, anyị agaghị enwe ike ịchekwa mmasị gị. Nke a pụtara na oge ọ bụla ị gara na webụsaịtị a ị ga-achọ ịkwalite ma ọ bụ gbanyụọ kuki ọzọ.
Gụkwuo banyere nke anyị kuki Policy